अन्तर्राष्ट्रिय – Nagarik Today
काठमाडौं, १२ मंसिर । (एजेन्सी) – युइएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडले स्वीस क्लब योङ ब्वाइजमाथि १–० को संघर्षपुर्ण जित निकालेको छ । घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा मंगलबार राति भएको खेलमा मरौउने फेलियानीले इन्जरी समयमा गोल गरेपछि युनाइटेडले योङ ब्वाइजमाथि संघर्षपूर्ण जित निकालेको हो । फेलियानीले इन्जुरी समयको थप गरिएको पहिलो मिनेटमा रोमेलु लुकाकुको पासमा गोल गरेका थिए । बलमा पकड जमाएपनि युनाइटेडले गोलका केही सुन्दर मौकाहरु खेर फालेको थियो । योङ ब्वाइजले पनि केही मौकाहरु खेर फालेको थियो । महत्वपूर्ण जितसँगै युनाइटेड च्याम्पियन्स लिगको प्रि–क्वाटरफाइनलमा पुग्न सफल भएको छ । युनाइटेड समूह ‘एच’ को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणका पुग्न सफल भएको हो । यो समूहबाट युभेन्टस समूह विजेताको रुपमा प्रि–क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । viagra patent.
काबुलमा आत्मघाती हमला ४० को मृत्‍यु
काबुल,४ मङ्सीर । अफगानिस्तानको राजाधानी काबुलमा आत्मघाती आक्रमण हुँदा ४० जनाको ज्यान गएको छ । पैगंबर मोहम्मदको जन्म दिनमा आयोजित सो कार्यक्रममा धर्मगुरुहरुलाई लक्ष्य गरी उक्त आक्रमण भएको श्रोत ले जनाएको छ । effexor xr on line. प्रारम्भिक विवरणहरूका अनुसार एकजना आत्मघाती हमलाकारीले सो विस्फोट गराएकोतर्फ संकेत गरेको एकजना सरकारी प्रवक्ताले बताए । विस्फोट भएका बेला उक्त हलमा कम्तीमा एक हजार मानिसहरू भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै तोलो समाचार संस्थाले बताएको छ।अहिलेसम्म कुनै समूहले हमलाको जिम्मा लिएका छैनन् । अफगानिस्तानमा तालेबान तथा इस्लामिक स्टेट लडाकु समूहले नियमितजसो बम हमलाहरू गर्दै आएका छन्।
रणबीर र दीपिका विवाह गरे पछी फर्किदा एयरपोर्ट लाग्यो भिड
मुम्बई,२ मङ्सिर । बलिउडका नवविवाहित जोडी रणबीर सिंह र दीपिका पादुकोण आइतबार बिहान मुम्बई फर्किएका छन् । यी जोडी बिहान ८ बजे एयरपोर्ट पुग्ने खबर सार्वजनिक भएपछि हेर्ने दर्शक फ्यानहरुले बिहान ६ बजे देखी नै प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । सिल्क कुर्ता र रातो रङको भारी सल ओढेकी दीपिकाले सिन्दुर र चुरा लगाएकी थिइन् । यी दुईको इटलीको लेक कोमोमा १४–१५ नोभेम्बरमा विवाह भएको हो । cialis in shanghai.
Apr152018 by suchanapatiNo Comments
नर्वेका कलाकारहरुबाट नेपाली गीतलाई भ्वाइलिनमा संगीत भर्दा भिडियो सहित :-
काठमाण्डौं । नर्वेका कलाकारहरुबाट नेपाली गीत "देशले रगत मागे मलाई बली चढाउनु" गीतलाई भ्वाइलिनमा संगीत भर्दा, भिडियो सहित :- ﻿﻿﻿﻿
काठमाडौं, २ वैशाख । क्यानडामा रहेका नेपालीहरुको संगठन नेप्लिज कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्यालगरीको अध्यक्षमा धुव्र राई निर्विरोध निर्वाचित भएका छन । दुई साता अघि भएको अधिवेशनवाट राई पुन निर्वाचित भएका हुन् । संगठनको चौधौ अधिवेशनले राइलाई आगामी २ बर्षका लागि दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । अधिवेशनले सचिवमा श्रीकान्त अर्याल, सहसचिवमा राजेश शर्मा, कार्यक्रम संयोजकमा नारायण भण्डारीलाई निर्वाचित गरेको छ । महाधिवेशनले कोषाध्यक्षमा घनेन्द्र न्यौपानेलाई निर्वाचित गरेको छ भने मिडिया संयोजकमा दिपेन्द्र भण्डारीलाई चयन गरेको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा बुद्धि अधिकारी, नारायण तिवारी, जगत खड्का र सुवर्ण विक्रम मल्ल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन । संस्थाको आगामी कार्यकालका लागि भएको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनमा समिर पाण्डे विजयी भएका छन । अधिवेशनमा महिलाहरु निर्वाचित नभएको भन्दै संगठनका केही महिलाहरुले गु
यु.ए.ई, बैशाख २ । विश्व ठकुरी समुदायको साझा थलो ठकुरी सहयोग सञ्जालको संयुक्त अरब इमिरेट्स शाखाको अध्यक्षमा पाल्पाका भिम बहादुर मल्ल निर्वाचित भएका छन् । हिजो शुक्रबार दुबई स्थित बरदुबईमा भएको सञ्जालको प्रथम अधिवेशनले मल्ललाई सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो । काठमाण्डौमा केन्द्रिय कार्यलय रहेको ठकुरी सहयोग सञ्जालले विश्व भरिका ठकुरीहरुलाई एकिकृत गर्ने उद्देश्यले देशका जिल्ला तथा ठकुरीहरुको बस्ती रहेका प्रवासमा समेत शाखा विस्तार गर्दै आइरहेको छ । यु.ए.ई. शाखा, प्रवासको दोस्रो शाखा हो , यस अघि ठकुरी सहयोग सञ्जाल कतारको स्थापना भैसकेको छ । यु.ए.ई.मा रोजगारको शिलशिलामा करिब तीन सय ठकुरी रहेको जानकारी नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लले दिए । यु.ए.ई. को नवनिर्वाचित कार्यसमिती २२ सदस्यि रहेको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा कोहलपुरका दिपक शाही निर्वाचित भएकाछन् । उपाध्क्षहरुमा सि.एन. चन्द र दिनेश मल्ल ठकुरी, त्य
‘नेपाली समाज टेक्सस’ले नयाँ बर्षमा अमेरिकामा गर्ने भयो नेपालीहरुको कुम्भ मेला ।